विश्वका पर्यटकको पहिलो रोजाई फ्रान्स, चौथोमा चीन पर्दा नेपाल कति स्थानमा ? – Etajakhabar
विश्वका पर्यटकको पहिलो रोजाई फ्रान्स, चौथोमा चीन पर्दा नेपाल कति स्थानमा ?
काठमाडौंः विश्वमा हरेक वर्ष १ अर्ब ३२ करोड पर्यटक घुम्न निस्किने गरेका छन् । यस्ता पर्यटकहरुको पहिलो रोजाईमा युरोपेली मुलुक फ्रान्स पर्ने गरेको छ । त्यस्तै विश्वभरबाट घुम्न निस्कनेहरुमा पनि सबैभन्दा धेरै पूरोपेलीहरु नै रहेका छन् ।
एक तथ्यांक अनुसार वार्षिक ६७ करोड युरोपेलीहरु भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् । एशिया/प्रशान्त क्षेत्रमा ३२ करोड, उत्तर तथा दक्षिण कोरियाका २० करोड व्यक्ति पर्यटनका लागि देश छोड्दा ६ करोड अफ्रिकी घुमफिरका लागि देश छोडेर बाहिर जाने गरेको तथ्यांक छ ।
सन् २०१७ मा १ अर्ब ३२ करोड मानिस पर्यटनका लागि निस्किँदा जीडीपीमा यसको योगदान १०.५ प्रतिशत रह्यो भने रोजगार क्षेत्रमा पनि १० प्रतिशत योगदान पुगेको थियो । ०१७ मा १ अर्ब ३२ करोड व्यक्ति पर्यटनका लागि निस्किँदा ८ करोड ९० लाख पर्यटक फ्रान्स पुगेका थिए । जसको ७८ प्रतिशत पर्यटक युरोपियन थिए । फ्रान्सपछि ८ करोड १७ लाख पर्यटकले स्पेन भ्रमण गरे । जसमा ८२ प्रतिशत युरोपबाट गएका पाइएको छ ।
अमेरिका र चीन सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने मुलुकमा क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेको छन् । यी दुई राष्ट्रले क्रमशः ७ करोड ५० लाख र ५ करोड ६० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भए । पाचौँ स्थानमा रहेको इटालीमा २०१७ मा ४ करोड ८६ लाख पर्यटक पुगेका थिए ।
विश्वभर पर्यटनमा निस्किने कुल पर्यटकको ०.०७१ प्रतिशत पर्यटक मात्र नेपाल आउने एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा ९ लाख ४० हजार पर्यटक मात्र आउँछन् । यो १ अर्ब ३२ करोडको ९ लाख ४० हजार ०.०७१ प्रतिशत हो । ०१७ मा ९ लाख ४० हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए जुन सन् ०१६ को तथ्यांकको तुलनामा २५ प्रतिशतको आगमन वृद्धि हो । विश्वमा भने हरेक वर्ष पर्यटको संख्या ७ प्रतिशतले बढि रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २०, २०७५ समय: १२:१३:०८